China Backpack T-B3164USB Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU USB kuchaja laptop bhegi
Unyanzvi: Saizi yemubhegi yemudzidzi iri 29 * 14 * 44cm (L * W * H) .Iine imwe yakasarudzika yakapetwa komputa yemakamuri pasi pefudzi bhanhire inokwana kusvika 15.6 inch laptop.Imwe huru hombe kamuri ine homwe zhinji inopa nzvimbo yakakwana yako zvezuva nezuva zvinoda kufanana nembatya, mabhuku, zvikwama nezvimwe. Iyo yekumberi kamuri inogona kuronga ako ese mamwe madiki madhishi. Mberi diki zipi muhomwe ndeye nyore kuwana kune zvinowanzoshandiswa zvinhu. Homwe mbiri dzeparutivi dzakanakira yako bhodhoro remvura uye amburera.
Inotsemurwa USB Cable: Yekunze USB bhegi netambo zviri nyore kubhadharisa foni / piritsi / zvimwe zvishandiso uchishandisa yako simba bhangi mukati. Tambo yeUSB inotsiviwa iri nani pakuchenesa bhegi, haizowana USB yakaora.
Inonyaradza musana sisitimu sisitimu: Ergonomic dhizaini yeS-dhizaina rakapetwa mapfudzi mabhandi akagadzirwa kubva pakakwirira uye nesponge yekufema uye machira anokupa wakasununguka kupfeka ruzivo. Iyo inogona kuchinjika bhanhire tambo inoita iyi bhegi rakakodzera chero vanhu.
Hunhu hweMhando: Iyo bhegi reUSB rakagadzirwa neaspushproof & scratch inomiririra cationic polyester, inogara yakasimba uye eco-inoshamwaridzika. Iyo isina mvura nzira mbiri yekuvhura yakakiya zipi yeiyo huru kamuri inopa mbiri yekudzivirira kuba
Icho chimwe cheakanakisa sarudzo yemudzidzi wechikoro, basa, kufamba, bhizinesi uye kushandiswa kwezuva nezuva.
Model Nhamba T-B3164USB
Ruvara: Dema, Grey, Bhuruu, Orenji, Rose Dzvuku
Kurongedza: 25 pcs / ctn
Saizi: L28 * W18 * H41cm / L31 * W17 * H47cm
Inokodzera saizi yelaptop: 14Inches / 15.6 Inches
Pashure: Bhegi T-B3143USB
Zvadaro: Bhegi T-B3213TPU